‘हजुरबा बिरामी भएको प्रमाण के दिउँ ?’ – ePublickhabar.com
भारतमा रेल, नेपालमा जालझेल !
epkuser बिचार/विश्लेषण , May 14th, 2020
काठमाडौं जिल्ला अदालतमा एक अधबैंसे युवक सुरक्षाकर्मीसँग कुरा गर्दै थिए । ति युवक प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सिडियो)लाई भेट्न चाहन्थे । कारण– घर जान सवारी पास चाहियो । घरमा हजुरबुबा बिरामी छन् ।
गेट भन्दा परै सुरक्षाकर्मीले रोके र सोधे गृह मन्त्रालयको पत्र छ ? युवकले उत्तर दिए छैन । त्यसो भए जान नमिल्ने जवाफ सुरक्षाकर्मील दिए ।
युवक भन्दै थिए– मेरो घरमा हजुरबुबा बिरामी हुनुहुन्छ । सुरक्षाकर्मी सोधे– हजुरबुबा बिरामी भएको के प्रमाण छ ?
युवकको अनुहार मलिन थियो ।
ति युवकले वडा कार्यलयबाट हजुरबुवा बिरामी भएको सिफारीस लिनुपर्यो । वडामा डाक्टर छैनन् होला भएपनि डाक्टरको भन्दा वडा कार्यलयको सिफारिस चल्ने होला प्रमाणका लागि । वडा कार्यलयले हजुरबुवा बिरामी भएको प्रमाणसहित सिफारीस देलान् त ?
पहिले सवारी पास नै दिन्थे वडाकार्यलयबाट अहिले दुरुपयोग भएको भनेर रोकिएको छ ।
वडा कार्यालय फोन गरेर बिरामी भएको सिफारिस बन्दैमा अर्को जिल्ला पास गरेर काठमाडौंबाट गाउँ फर्किन त मिलने ।
बिरामी नै लिएर एम्बुलेन्स आउँदा त छोडिदेला, यताबाट जान मिलेन ।
ति युवक यतैबट जाने कोसिस गर्दै थिए ।
वडा कार्यालयले बनाइदिए पनि कसरी हजुरबुवा बिरामी भएको प्रमाणसहित सिफारीस आइपुग्ला ? मोवाइल इन्टरनेटको जमाना छ युवकले सिफारीस त पाउँलान् तर त्यो सिफारीस प्रमुख जिल्ला अधिकारीले मान्लान् त ? त्यो सिफारीसले हजुरबुवा बिरामी भएको प्रमाण सहि ठानेर सिडियोले पास देलान् त ? पास नदिए युवकले बिरामी हजुरबुवा भेट्न जान के गर्लान ?
पहिले वडा कार्यलयले नै पास सवारी साधनलाई दिएको थियो तर पास दिँदा दुरुपयोग भएको भनेर वडा कार्यालयबाट पास नदिने निर्णय भएको छ । तर, एकले गरेको गल्तिले अहिले धेरैले समस्या भोगेका छन् ।
गृह मन्त्रालयले एक जिल्लाबाट अर्को जिल्ला जाने गरी जारी भएका सबै ई–पास खारेज गरेको छ ।
जेठ १ गतेबाट लागू हुने गरी सबै पार खारेज गर्न निर्देशन दिएको हो । गृह मन्त्रालयका उप–सचिव उमाकान्त अधिकारीले भने, ‘बिहीबारदेखि लागू हुने गरी यो निर्णय गरिएको हो ।’
अब एक जिल्लाबाट अर्को जिल्ला जाने गरी अत्यावश्यक कामका लागि पास जारी गर्नुपर्ने अवस्था आएमा उपत्यका बाहिरका जिल्लाहरुको हकमा पुग्ने जिललाबाट प्रमुख जिल्ला अधिकारीको स्वीकृति लिनुपर्नेछ ।
उपत्यका प्रवेश गर्ने पासका लागि गृह मन्त्रालयको स्वीकृति लिएर नम्बर समेत खुलाउनुपर्छ ।
पास नभई सवारी आवागमन गरे अर्को जिल्ला पुग्नु अगावै रोक्न गृह मन्त्रालयले निर्देशन दिएको छ ।
गृह मन्त्रालयका उपसचिव अधिकारीकाअनुसार उपत्यकामा कार्यरत सरकारी कर्मचारीको हकमा पास अनिवार्य गरिएको छ ।
कोरोना नियन्त्रण बाहिर जान सक्ने चेतावनी
बुधबारसम्म अढाइ सयमा कोरोना भाइरस (कोभिड(१९) का संक्रमित भेटिइसकेकोाा छ । जबकि कोभिड १९ संक्रमणको पहिलो केस देखिएको ५८ दिनपछि मात्र दोस्रो केस देखिएको थियो भने यो संख्या बढेर ३० जना पुग्दा नेपालमा कोरोना संक्रमण देखिएको तीन महिना नाघिसकेको थियो ।
त्यसपछि भने एकाएक संक्रमणको ग्राफ उकालो लाग्यो । वैशाख ५ गते उदयपुर र चितवनमा गरी १४ जनामा संक्रमण देखिएपछि संक्रमणको दर स्थिर रहेन । यो ग्राफ बिहिबार बिहानसम्म आइपुग्दा नेपालमा कोरोना संक्रमितको कुल संख्या २५० पुगेको छ ।
यो संख्या तीव्र गतिमा बढ्नसक्ने स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका अधिकारीहरूको आकलन छ ।
अहिले सरकारले उदयपुरको भुल्के, वीरगञ्ज, नेपालगञ्ज, रुपन्देही र कपिलवस्तुलाई कोभिड १९ को हटस्पट मानेको छ । यसबाहेक भारतसँग सिमाना जोडिएका सबै जिल्लालाई कोभिड १९ को रेड जोनमा राखिएको छ ।
स्वास्थ्य मन्त्रालयका एक विज्ञका अनुसार प्रदेश नम्बर २ र ५ लाई डेन्जर जोन मानिएको छ । त्यहाँ खुला सीमाका कारण भारतबाट रातको समयमा नेपालीहरू लुकिछिपी आउने गरेका छन् ।
कतिपय काठमाडौं उपत्यकामा पनि प्रवेश गर्ने गरेको मन्त्रालयमा रिपोर्टिङ छ । तर, कुन ठाउँबाट कति मानिस आए भने यकिन तथ्यांक छैन ।
यसरी आएका मानिसहरूकै कारण कोरोनाको जोखिमपूर्ण क्षेत्र अझ बढ्ने एक विज्ञले सुनाए ।
‘एक जनाले १० र १० ले सयलाई संक्रमित गराउन सक्छ,’ एक विज्ञ भन्छन्, ‘हरेक नागरिक सतर्क भएनन् भने कोरोना हाम्रो नियन्त्रणभन्दा बाहिर जानेमा दुई मत छैन ।’
भारतमा रेल चल्यो, नेपालमा त्रास !
भारतमा मंगलबारदेखि रेल सेवा सञ्चालनमा आएको छ । ‘रेड जोन’मा नपरेका क्षेत्रमा लकडाउन खुकुलो पारिएको छ । ‘ग्रिन जोन’ क्षेत्रमा त गाडी नै चलाउन थालिएको छ। यससँगै नेपालमा झनै कोरोना भाइरस फैलिने जोखिम देखिएको छ। सीमावर्ती पाँच स्थानीय तहका बासिन्दाले असुरक्षित महसुस गर्न थालेका छन्।
रेल सञ्चालनमा आएकाले उता गएका मजदुर नेपाल फर्किएपछि चुनौती बढ्ने सबैको बुझाइ छ ।
नेपाल छिर्ने पहिलो नाका त सीमा क्षेत्र नै हो। सीमा हुँदै मात्र उनीहरू आफ्नो ठाउँमा जान्छन् ।
भारतमा लकडाउन खुकुलो हुँदा नेपालीहरू सीमासम्म आएका छन् । यो क्रम एक–दुई दिनमा बढ्ने अनुमान छ। उत्तर प्रदेश र विहारसम्म नै रेल सेवा सञ्चालन हुँदा सयौं नेपाली सीमामा आउने आकलन गरिएको छ ।